‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ कस्तो चल्यो ? - NayaNepal News
Home मनोरन्जन ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ कस्तो चल्यो ?
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ कस्तो चल्यो ?
काठमाडौं । गएको पुष १० गतेबाट ९ महिनापछि सञ्चालनमा आएका सिनेमा हलमा माघे संक्रान्तिबाट अभिनेता शिव श्रेष्ठ निर्मित तथा अभिनीत फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनमा आएको छ । अन्य निर्माता यो समयमा फिल्म प्रदर्शन गर्न तयार नहुँदा अभिनेता श्रेष्ठले जोखिम उठाएका थिए । यो फिल्मले सिनेमा हलमा दर्शक फर्काउनेमा फिल्मकर्मीदेखि हल सञ्चालकसम्म पूर्ण विश्वस्त थिए ।
वितरक गोपालकाजी कायस्थले सिनेमा हलमा फिल्मको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार गरे । उनले भने ‘बिहीवार केही राम्रो थियो । शुक्रवार विजोग भयो । शनिवार पनि हलमा दर्शकको उपस्थिति त्यस्तो उत्साहजनक थिएन । आइतवारबाट झन् डामाडोल नै छ ।’ नयाँ फिल्म हेर्न समेत दर्शक किन हलमा नआएका होलान् रु भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘फिल्म नै गतिलो हुनुपर्‍यो नी १’
दिपेश सापकोटा निर्देशित यो फिल्मको पूरा छायांकनै नभइ प्रदर्शन गरिएको हो । प्रियंका कार्की, वर्षा राउत लगायतका कलाकारको डबिङ समेत गरिएको थिएन । आफूहरुलाई सुनाएको कथा अनुसार छायांकन नभएको भन्दै कलाकारहरुले फिल्मको प्रचार-प्रसार नै बहिस्कार गरेका थिए । फिल्म कमजोर रहेको जानेरै होला निर्माण टिमले पनि प्रचार-प्रसार खासै गरेन । सामान्य समयमा फिल्म प्रदर्शन गरेको भए निर्देशकदेखि कलाकारसम्मलाई समीक्षक र दर्शकबाट गालीको वर्षा हुने थियो । यो समयमा फिल्म प्रदर्शन गरेर निर्माण टिम यसबाट धेरै हदसम्म बचेको छ । तर, फिल्मकर्मीहरुले भने ४० वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीमा विताइसकेका र कयौं सम्झनलायक फिल्म दिएका शिव श्रेष्ठले यसप्रकारको फिल्म बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
Previous articleसबै विद्यालय खुले भक्तपुरका
Next articleठूला आन्तरिक विमानस्थलको धमाधम विस्तार
पुष्पराज दशकपछि अभिनयमा फर्किए
फिल्म ‘जुनेली’ युटुवमा सार्वजनिक
‘सनम’ भन्दै फेरि आए पुष्कर चौलागाई (भिडियो सहित)
ज्योतिष हरिहर अधिकारी ‘कबिर सिंह’ बन्ने
तरकारीवालीको फिल्म ‘लम्फू’ ट्रेलर रिलिज ( भिडियो सहित)